FAQ - QuicKyat
ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း မေးခွန်းများမေးချင်ပါသလား? အောက်မှာ အမေးအများဆုံး မေးခွန်းများကို
လျှောက်လွှာများအားလုံးသည် သင်တို့၏ Android ဖုန်းများတွင်သာဖြည့်သွင်းရပါမည်။ လျှောက်လွှာများစတင်ဖြည့်သွင်းဖို့အတွက် Google Play Store မှ QuicKyat App ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ App ကို Download ပြီးရင် Facebook E-mail လိပ်စာ၊ စကားဝှက် (Password) နဲ့ ဆိုင်းအင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များကိုဖြည့်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက် - လော့ဂ်အင် အချက်အလက်များ ကို ပြောင်းလို့မရပါ။
QuicKyat ကငွေပမာဏ ဘယ်လောက် အထိ ချေးပေးမှာလဲ? ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ချေးပေးမှာလဲ?
ပထမဆုံးစသုံးသူ အနေနဲ့ သင့်ကို ကျပ်၅ဝ,ဝဝဝ (ငါးသောင်း)အထိနဲ့ အများဆုံး(၄၅)ရက် ပေးချေးပါတယ်။ ချေးငွေကို ပြန်ပေးချေ ရမည့် ရက်ထက် စောပြီးပြန်ပေးချေပါက ချေးငွေ ပမာဏကို ပိုပိုတိုးလာပြီး အတိုးနှုန်းပါ လျှော့ကျ လာမှာ သေချာပါတယ်။
QuicKyat ဝင်ဆောင်မှု တွေက ရန်ကုန်သား တွေဘဲရတာလား?
အခုအစပိုင်းမှာတော့ ရန်ကုန်မှာဘဲ ရမှာပါ။ နောက်ပိုင်း ဆိုရင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ သူတွေ အားလုံး Android ဖုန်းမှာ မိုဘိုင်း ဒေတာ ရှိတာနဲ့ သုံးလို့ရပါပြီ။
Android အပြင်ကွန်ပျူတာ မှသို့မဟုတ် အခြား Operating system တွေကနေပါချေးငွေကိုလျှောက်လို့ရပါလား?
အခုတော့ Android မှာဘဲ လျှောက်လို့ ရပါသေးတယ်။ အခြား Operating Systems တွေမှာ စပြီး အသုံးပြုလို့ ရတာနဲ့ အသိပေး ကြေညာမှာပါ။
ချေးငွေတွေကို မှန်မှန်ပြန်ဆပ်လာသည်နှင့်တူ ကျွန်တော်တို့နှင့်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်လာတဲ့အခါ ချေးငွေပမာဏကပိုပြီးတိုးလာမှာပါ။
ဘဏ်အကောင့်နှင့်ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်များလိုအပ်ရခြင်းအကြောင်းက သင့်ချေးငွေ လျှောက်လွှာကို အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ ချေးငွေကို အမြန်ဆုံး လွှဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ် တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
စိစစ်အတည်ပြုရမည့်ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့် လုံခြုံရေး အတိုင်းအတာများ အတွက် မှတ်ပုံတင်ကို လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွတ်တော်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်၍အခက်အခဲများသော်လည်းကောင်း တိုင်ကြားချက်များရှိပါက e-mail ဖြင့် questions@quickyat.com ကို ရေးပို့လို့ ရတဲ့ အပြင် www.facebook.com/quickyat မှ တစ်ဆင့် ရေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန် ပေးပါမယ်။
ချေးငွေလျှောက်လွှာကို "ဆောင်ရွက်နေပါတယ်" ဟု ပြသနေပါပြီ။ ဒါပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ?
သင့်ရဲ့ CB Pay အကောင့်သို့မဟုတ် CB ဘဏ်အကောင့်ကို စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ ချေးငွေကို လွှဲပေးပို့ရန် တန်းစီ နေတဲ့ အခါ မှာထိုသို့ ပြသပါတယ်။ လျှောက်လွှာရရှိတဲ့အချိန်မှစပြီး ၂ရက်အတွင်း ငွေလွှဲ ရရှိမှု မရှိပါက ကျွန်တော်တို့ကို အကြောင်းကြား ပေးပါ။
သင့်လျှောက်လွှာ အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ (၂) ရက်အတွင်း ငွေဝင်လာမှာပါ။ အချိန် ကျော်သွား ပါက ကျွန်တော် တို့ကို အကြောင်းကြား ပေးပါ။ ငွေဝင် မဝင်ကို သတိပေး ခြင်းများ မရနိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ အကောင့် ထဲဝင် မဝင် စစ်ဆေး ပေးဖို့ အကြံပေးချင် ပါတယ်။
လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ဖြည့်သည့် အခါ မှန်ကန်စွာ ရေးဖြည့်ခြင်း မရှိသောကြောင့်
ကျွန်တော်တို့၏ငွေချေးရန် သတ်မှတ် ထားသောစံကိုမမီသောကြောင့်
ယခင်ချေးငွေစာရင်း မှတ်တမ်း မကောင်း သောကြောင့်
ဖြည့်သွင်းထားသည့်ဒေတာများမှ မမှန် မကန် ပြုလုပ်မှု ပုံစံ တစ်ခုခုကို တွေ့ရှိ သောကြောင့်
ချေးငွေလျှောက်လွှာကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ချေးငွေအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပေးချက်များ (notifications) မရသေးပါ။
သင်ချေးငွေလျှောက်လွှာကို တင်သွင်း လိုက်တာနဲ့ လျှောက်လွှာကိုရရှိပါပြီဟု email ပို့ပါတယ်။ Notification များ မရရှိခဲ့ပါက App ထဲက ပင်မ စာမျက်နှာ မှ ”ချေးငွေ အခြေ အနေ”ကို နှိပ်ပြီး ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဘဏ်အချက်အလက်များကို App ထဲမှာ ပြောင်းလိုရပါလား?
အချို့အချက်အလက်တွေကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပြောင်းလို့ရပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကိုတော့ App ထဲမှာ ပြောင်းခွင့် မရပါဘူး။ ပြောင်းချင်တဲ့ အချက် အလက်များကို email ဖြင့် သက်သေ ပြချက် များနှင့် အတူ ပူးတွဲ တင်သွင်းပြီး ပြောင်းရခြင်း အကြောင်းအရာ ကိုပါ ရေးဖြည့်ပြီး questions@quickyat.com ကိုပို့ပေးပါ။
သင့်ချေးငွေနဲ့ပတ်သက်သမျှအားလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက် QuicKyat App အကောင့်ထဲ ဝင်ပြီး “ချေးငွေကျထားပြီး” ပြသထားတဲ့ နေရာကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။
ပရိုဖိုင်းနှင့် CB Pay ပြင်ဆင်မှု
QuicKyat ချေးငွေရယူနိုင်ဖို့ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုပါဘူး။ App ထဲမှာ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း တဲ့အခါ မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းများကို သာမှန်ကန် တိကျစွာ ဖြည့်ပေးဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။
မှတ်ချက် - ကျေးဇူးပြုပြီးရေးဖြည့်ရန်လိုအပ်သောနေရာများတွင်မှန်ကန်တိကျစွာရေးဖြည့်ပေးပါ။ မမှန်မကန်ဖြည့်ထားသည်သို့မဟုတ်လိမ်ညာထားပါက QuicKyat ကိုအသုံးပြုခွင့် မှ ပိတ်ပင်ထားခံရပါလိမ့်မည်။
CB Pay အချက်အလက်များကို ဘာကြောင့်တောင်းတာပါလဲ?
ပြန်ပေးချေရမည့်ရက်ရောက်တဲ့အခါလွယ်ကူစွာပေးချေနိုင်ဖို့ ဒီအချက်အလက်များကို QuicKyat ကတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်များက အလွန် အရေးကြီး တာကို ကျွန်တော်တို့ နားလည် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် အလွန်လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများ နှင့် QuicKyat App ကို တည်ဆောက် ထားပါသည်။ သင့်အချက် အလက်များကို ဘယ်သူမှ ခွင့်မရှိဘဲ ကြည့်ရှုလို့ မရအောင် encrypt လုပ်ထားပါသည်။
ဘဏ်အမည် - CB Bank
အကောင့်အမည် - Kander Myanmar Co., Ltd.
အကောင့်နံပါတ် - 0086-1005-0001-7008
ပြန်ပေးချေရမည့်ငွေပမာဏကို CB ဘဏ်မှ သို့မဟုတ် CB ဘဏ်သို့ လွှဲနိုင်သော ဘဏ်များ မှ တစ်ဆင့် အထက်ပါ ဖော်ပြထားသော ဘဏ်အကောင့် နံပါတ်သို့ ငွေသွင်း ငွေလွှဲ ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။
CB Pay ဖြင့်ငွေလွှဲခြင်း
သင့်၏ CB Pay App ထဲမှတစ်ဆင့် အထက်ပါဖော်ပြထားသော အကောင့် နံပါတ် ဖြင့် ငွေလွှဲလို့ ရပါသည်။
CB Pay ဖြင့်ဘယ်လိုလွှဲရမလဲ?
မှတ်ချက် - ငွေသွင်း/ငွေလွှဲပြီးပါက App ထဲမှာရှိသည့် "ချေးငွေပေးချေခြင်း" စာမျက်နှာမှ "အတည်ပြု" ကိုနှိပ်ပြီး ငွေလွှဲ ခဲ့သော အချက် အလက်များ ကို စစ်ဆေးရန်အတည်ပြု လိုက်ပါ။ ဒါကို ဆောင်ရွက် လိုက်မှ သာလျှင် ကျွန်တော် တို့သည် ဝင်လာတဲ့ စာရင်းကို မှန်ကန်စွာ တိုက်ကြည့် နိုင်မှာပါ။
ချေးငွေများအားလုံးကို ရက်မပြည့်ခင် စောသွင်းခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိုးကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းအတိုင်းသာ ကောက်ခံပါမည်။
ပြန်ပေးချေရမည့်ရက်တွင် ငွေပြန်ပေးချေနိုင်မှုမရှိပါက ဘာဖြစ်လာနိုင်ပါလဲ?
QuicKyat ကနေချေးငွေကို သတ်မှတ် ထားတဲ့ရက် သို့မဟုတ် ရက်စောပြီး ပေးချေနိုင် မှသာ ချေးငွေကို ယူပါဟု အကြံပေး ချင်ပါတယ်။ ရက်နောက်ကျခဲ့ ပါက ရက်နောက်ကျ ကြေးများ တက်လာ နိုင်သောကြောင့် ပေးရမည့် ပမာဏထက် ပိုပေးလာရဖို့ သင့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မှတ်ချက် - ပြန်ဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သူများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင်ပျက်ကွက်သူများစာရင်းသွင်းခံရတဲ့အပြင် QuicKyat နှင့်အခြား ငွေချေး လုပ်ငန်းများ တွင် ချေးငွေ လျှောက်ခွင့်များ ရရှိဖို့ လွယ်ကူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
အခုဘဲငွေချေပြီးပါပြီ။ နောက်ချေးငွေကို ဘယ်တော့ ထပ်လျှောက်လို့ ရပါလဲ?
QuicKyat အကောင့်ထဲဝင်ပြီးငွေပေးချေမှုအခြေအနေမှာ “ငွေချေပြီး”ဟုပြသထားပါမည်။ အဲဒါက ငွေလက်ခံ ရရှိပြီးကြောင်း ပြသထားတာပါ။ ငွေလက်ခံ ရရှိပြီးကြောင်း ပြသထားတာနဲ့ ချေးငွေကို ထပ်လျှောက်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် - ကျွန်တော်တို့၏ platform ကိုအလွန် အကျွံ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သုံးစွဲသူများ၏ ငွေရေးကြေးရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ကန့်သတ်ချက်များ ချထားပါသည်။ အောင်မြင်စွာ ချေးငွေ ပေးချေမှု (၅) ခေါက်ထက် လျော့နည်းသော သူများသည် နောက်ထပ် ချေးငွေ လျှောက်နိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းကာလ (၁၀) ရက်ရှိပါသည်။ (၁၀) ရက်ပြည့်သည့် အခါ ထပ်ပြီး ချေးငွေကို လျှောက်နိုင်ပါပြီ။
QuicKyat မှငွေလွှဲပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ (ချေးငွေကျပြီးပေါ်သောအချိန်မှစပြီး) (၂၄)နာရီအတွင်း ချေးငွေ မဝင်လာ သေးပါဘူး။ ဘာလုပ်ရပါမလဲ?
အကောင့်ထဲသို့ (၂၄) နာရီ အတွင်း ငွေမဝင်လာသေးပါက support@quickyat.com ကို ဘဏ်ငွေ စာရင်းရှင်းတမ်း သို့မဟုတ် CB Pay ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို ပူတွဲပြီးပို့ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်။
ချေးငွေကိုပြန်ပေးချေပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အကောင့်က နောက်ဆုံးလက်ရှိ အခြေအနေကို မပြသေးဘူး။ ဘာလုပ်သင့် ပါသလဲ?
သင် CB Pay နှင့်ငွေချေသည့်အခါ သော်လည်းကောင်း ဘဏ်မှ ငွေလွှဲသည့်အခါ သော်လည်းကောင်း ငွေလွှဲဖေါ် ပြချက်တွင် နာမည်အပြည့်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email လိပ်စာကိုပါ ရေးဖြည့်ပေး ခဲ့ပါ။ ရေးဖြည့်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးပေးရန် ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ ဘဏ်အကောင့် ထဲသို့ ငွေအဝင်ကိုစောင့်ရတဲ့ အတွက် အနည်းငယ်တော့ နောက်ကျတတ် ပါတယ်။ သည်းခံပြီး စောင့်ကြည့်ပေးပါ။
မှတ်ချက် - ငွေလွှဲပြီးပါက App ထဲမှ “အတည်ပြု” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ငွေလွှဲ အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပေးပါ။ ပြီးတော့ သင်ဘဏ်မှ ငွေသွင်း ငွေလွှဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါက App ထဲတွင် “ငွေချေပြီး” ဟုပြသဖို့ ရုံးဖွင့်ရက် (၁)ရက်မှ (၂)ရက်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
ရပါတယ်! မှားရွင်းမှုနည်းသွားအောင် ပေးချေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း ငွေလွှဲ စလစ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး support@quickyat.com ကိုပို့လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည်သင့်ကိုကျွန်တော်တို့၏ဖောက်သည်အဖြစ်ချစ်ခင်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းခွဲခွာဖို့မလိုလားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ပေးချေရမည့် ရက်တွင်ငွေပေးချေခြင်း မရှိခဲ့ပါက အောက်ပါအတိုင်း လေးနက်သော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။အေႂကြးေပးရန္ စိတ္ခ်ရမႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ ရမွတ္မ်ား ေလွ်ာ့နည္း လာသျဖင့္ QuicKyat အျပင္ အျခား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားမွ သင့္ကို ေငြေခ်းခြင့္မ်ား တားဆီးထား ပါလိမ့္မည္။
QuicKyat မှသင့်အကောင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထား သဖြင့် သင်နောင်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက် ခံစားခွင့်များ ရနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါ။
ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကို သင့်အား တိုင်ကြား အစီရင်ခံပါမည်။
ဖြစ်နိုင်မည့် ဥပဒေအရ အရေးယူမှု - သင်သည် စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူညီပြီးမှ ပြန်လည် ပေးဆပ်ရန် အလို မရှိကြောင်းဖြင့် တရားရုံး တွင် တရားစွဲ ခံရနိုင်ပါမည်။
ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့ရဲ့ဒေတာတွေက QuicKyat နဲ့ဆိုရင်လုံခြုံရဲ့လား?
လုံခြုံပါတယ်! ကျွန်တော်တို့သည် သင်တို့၏ ဒေတာများ အားလုံးကို အလွန် တန်ဖိုးထားသဖြင့် လုံခြုံစွာ သိမ်းထားတဲ့ အပြင် ဘယ်သူ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ကိုမှ မဝေပါဘူး။ ဒေတာများကို လုံခြုံသော Encrypt လုပ်ထားသည့် ပုံစံဖြင့် ထိမ်းသိမ်းထားပြီး ခွင့်ရှိရင် ဘယ်သူမှ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုလို့မရပါဘူး။
ဖုန်းပျောက်သွားလို့ QuicKyat အကောင့်ကိုဘယ်လိုပြန်သွင်းလိုရပါလဲ?
သင့်အကောင့်ကိုလွယ်ကူစွာပြန်သွင်းလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းအသစ်မှာ QuicKyat App ကို Download လုပ်ပြီး သင့်အချက်အလက်များနှင့် ပြန်ဝင်လို့ရပါတယ်။
မှတ်ချက် - တူညီတဲ့ Facebook အကောင့်အချက်အလက်များနှင့်ပြန်ဝင်ပေးပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး သင် App ထဲမှာ ဖြည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှင့် သင့်ဒီဖုန်းကရိယာထဲထည့်ထားတဲ့ စင်းကဒ်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကတူညီရပါမယ်။ နံပါတ်ဖြည့်သွင်းသည့်အခါလည်း သုညမပါဘဲ နိုင်ငံတကာသုံးပုံစံဖြင့်ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ ဥပမာ - 09-123456789 ဆိုရင် +959-123456789 ဆိုပြီးရေးဖြည့်ပေးပါ။ QuicKyat မှ အတည်ပြုရန်ဖုန်းဆက်သည့်အခါ ဖုန်းမကိုင်ဖြစ်အောင်သေချာစွာဂရုစိုက်ပေးပါ။
မှတ်ချက် - Dual-Sim (စင်းကဒ် ၂ ကဒ်) ဖုန်းဖြင့်သုံးနေပါက ရေးဖြည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်၏စင်းကဒ်ကို Slot 1 ထဲသို့ပြောင်းထည့်ပေးပါ။
ရေးဖြည့်ထားတဲ့အကောင့်နံပါတ်နှင့်အမည် ကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အကောင့်နံပါတ်နှင့်အမည်ကမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုမှုများ များနေသောကြောင့် အတည်ပြုရန်အချိန်ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ၁ နာရီ - ၂နာရီ လောက်စောင့်ပြီးမှ ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
လျှောက်လွှာကိုလျှောက်နေတဲ့အခါ ဒီစာလေးက မှားယွင်းချက်အနေဖြင့်ပေါ်ပေါ်လာပါတယ်။ “မှတ်ပုံတင်သုံးထားပြီး”
ဒါက QuicKyat မှာဒီမှတ်ပုံတင်နဲ့ အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးသားလို့ဆိုလိုတာပါ။ သင်အကောင့်မဖွင့်ထာတာသေချာပါက အခြားသူကသင့် အချက်အလက်များကိုသုံးထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက် - သင့်ကိုယ်ရေးကိုတာအချက်အလက်များနှင့်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကိုလျို့ဝှက်ထားသင့်ပြီးမည်သူနှင့်မှဝေမျှပြီးမသုံးသင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏အရေးကြီး အချက်အလက်များကိုအလေးထားပြီးကာကွယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်မတူသောသူ နှစ်ဦး၏အကောင့် နှစ်ခုကို မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးထဲတွင်ပေးသွင်းခွင့်မပေးပါ။ QuicKyat အကောင့် ရှိပြီးသားမိုဘိုင်းဖုန်းမှာ သင့်အကောင့်သွင်းရန် ကြိုးစားခဲ့ရင်လည်း သင့်အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ ချေးပြီးတဲ့ငွေကိုပြန်ပေးဆပ်ခြင်း မရှိရင်လည်း သင့်အကောင့်ကဆိုင်းငံ့ခံရပါမည်။
Quickyat အကောင့် နှစ်ခုဖွင့်ထားခြင်း
မှတ်ချက် - မမြဲ တူညီသော Facebook အကောင့်အချက်အလက်များဖြင့် လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ။
QuicKyat App ကို Google Play Store ကနေ Download လုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဒီစာလေးပေါ်နေတယ် “DEVICE NOT COMPATIBLE”. အဲဒါဘာပြောတာလဲ?
QuicKyat ကအခု ဗားရှင်း 5.0 နှင့် အထက်ရှိတဲ့ Android ဖုန်းများနှင့်သာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အချို့ဖုန်းတွေမရတဲ့အကြောင်းက QuicKyat App ကလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးဆက်တင် (Security Setting) မမှီလို့ပါ။ QuicKyat ကိုသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဗားရှင်းရှိမရှိကိုသင်၏ဖုန်းမှ ဆက်တင်ကိုစစ်ဆေးလိုက်ပါ။